मुलुकको आवश्यकता संविधान संशोधन कि निर्वाचन ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २ पुष २०७३, शनिबार १५:१७ |
विशेष । लामो संघर्षपछि जारी भयो, संविधान । संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा जान कोहि सहमत भए त कोहि असहमत ।
सहमतहरुको पक्ष र असहमतहरुको स्वरमा फसेका संविधान यतिबेला कार्यान्वयनको तहमा जटिल बनेको छ । संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने एकतर्फी अडान र निर्वाचन गरेर आवश्यकता अनुरुप संशोधन गर्दै जानु पर्ने अडानले संविधान कार्यान्वयनमा नआई थिलथिलो बनाइदै छ ।
अमृत मंथन गरे जसरी संविधानलाई बिचमा राखेर यतिबेला राजनीति भइरहेको छ । कुरा संशोधन या निर्वाचन भन्ने विषयको हो । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएलगत्तै घन्किएका विपक्षको विरोधका स्वरले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने अडान छ । उता सत्ता पक्ष लगायत मधेश केन्द्रित दलको भने संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अडानमा अडिग छन् । यो दुई धारमा देखिएको दुईवटा गम्भीर विषयले समयमै निकास दिने सम्भावना देखिएको छैन । तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा गराउनेमा सहमति भएपनि न एमाले संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबुल गर्न तत्पर छ । न त सरकार निर्वाचन विधेयक अघि सारेर संशोधन विधेयक पछि हटाउन नै ।
यहि कारणले दलहरु के मा सहमत हुने हुन् त्यसले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । संशोधनको प्रस्तावले प्रदेश नं ५ का लगभग सम्पूर्ण जिल्ला बन्द भएका छन्। यता सरकारले आफनो पदको लोभमा एकलौटी लादेको संशोधनको प्रस्तावले निकै असर गर्ने विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाईले भने संशोधन भन्दा निर्वाचन गर्नुपर्ने चाहना छर्लङ्खिछ । यता काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने स्थानीय निकायको निर्वाचन पुरानै संरचनामा गर्ने तीन दलको सहमतिबाट काँग्रेस पछि नहटने अडान राख्दै गर्दा भएको भनिएको सहमतिबारे नेपाली जनता रनभूल्लमा परेका छन् ।
दलहरुबीच देखिएको पहिला को र के भन्ने विषयलाई छिटो टुङ्गोमा ल्याएर मुलुकलाई निकास दिन जरुरी छ । एउटै विषयमा अडान लिएर बस्ने हो भने मुलुकले निकास मात्र होइन ठूलो दुर्घटनाबाट गुज्रिन पर्ने सम्भावना टड्कारो देखिएको छ ।
Previousकाँग्रेस र माओवादीले मधेसी मोर्चासँग मिलेर एमालेलाई सदनबाट चुनौति दिने
Nextपपुवा न्यूगिनीमा ८ म्याग्निच्यूटको शक्तिशाली भूकम्प
बोर गर्नु भो अम्बर सर !
२५ जेष्ठ २०७३, मंगलवार १५:२५